သငျသညျကိုအသုံးပြုခြင်းခင်မှာသိထားသင့် Semax ၏ထိပ်တန်း7အကျိုးကျေးဇူးများ - Phcoker
က S-23 ≥98%
မဂ္ဂနီစီယမ် (2R, 3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate ≥98%
N-methyl-D-aspartic အက်ဆစ် (NMDA) ≥98%
Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) ဝက်ဦးနှောက်≥98%
compound 7P ≥98%
သငျသညျကိုအသုံးပြုခြင်းခင်မှာသိထားသင့် Semax ၏ထိပ်တန်း7အကျိုးကျေးဇူးများ
1 ။ Semax Peptide ကဘာလဲ?
2 ။ Semax လျှောက်လွှာ
3 ။ Semax အကျိုးကျေးဇူးများ
4 ။ Semax ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလား
5 ။ အဘယ်သို့ငါ Semax ကိုသုံးပါသင့်သလဲ
6 ။ သငျသညျ Semax အသုံးပြုတဲ့အခါမဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါသလား?
7 ။ သုံးတဲ့အခါသင်တစ်ဦး Semax stack ကိုသုံးပါသငျ့သလော
8 ။ Selank vs Semax အကြားခြားနားချက်များဘာတွေလဲ?
9 ။ ငါအွန်လိုင်း Semax ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ?
Semax ထို့နောက်အကြာတွင်လေဖြတ်ခံရသူကုသမှုအတွက်ရုရှား၌ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုနှင့်သိမြင်မှုယိုယွင်းအတည်ပြုခြင်း, 1980s နှင့် 90s အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Semax peptide ။ ရုရှား၌အမျိုးမျိုးသောလူ့လေ့လာမှုများအကြောင်းမဲ့ခဲ့ပြီး, ထိုသို့သိမြင်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်ဂုဏ်သတ္တိများအပိုင်သက်သေပြလျက်ရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, မူးယစ်ဆေးလည်းစိုးရိမ်ပူပန်လျှော့ချအတွက်ကူညီဖို့အဖြစ်အသုံးပြုသူရဲ့ခံစားချက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာပေါ်အလုံအလောက်မှတ်တမ်းတင်ဆေးပညာဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်လည်းရှိသေး၏။ Semax စံ nootropic အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, သို့သော်လည်းဤကဲ့သို့သောဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုတိုးမြှင့်အတွက်နဲ့အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတို့တွင်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တိုးမြှင့်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အပိုဆောင်းအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးမှန်ကန်စွာယူသောအခါ Semax အကျိုးကျေးဇူးများကိုသာခံစားခဲ့ရနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျပိုကောင်းရလဒျမြားနှငျ့အတှေ့အကွုံအဘို့သင့်ဆရာဝန်ကနေအသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်မှုအရသေချာပါစေ။
Semax (80714-61-0) ထိုကဲ့သို့သောလေဖြတ်အဖြစ်မမှန်များ၏ကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကူညီနိုင်ရန် 1980s အတွက်ရုရှားမှာတီထွင်ခဲ့ကွောငျးတစ်ဦး peptide ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ Semax စိုးရိမ်စိတ်ကွဲပြားခြားနားသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကုသ၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုသက်သေပြပြီးနောက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆေးဝါးရုရှားစာရင်းထဲတွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်များလည်းလည်းမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်အတွက်အရေးပါလှတဲ့အများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်ပြီး nootropic မူးယစ်ဆေးအဖြစ် Semax သတ်မှတ်။ ရုရှားနှင့်ယူကရိန်းသည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အသုံးပြုမှုအတည်ပြုခဲ့ကြပေမယ့်, ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကတိုက်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောကျန်းမာရေးအခြေအနေကုသမှုအတွက်အရေးပါသောအဖြစ်မှသက်သေပြခဲ့ပေမဲ့လက်ခံမရှိသေးပေ။ သို့သျောထို Semax အမှုန့်ကိုသုံးပြီးထံမှသင်တို့ပိတ်ဆို့မထားဘူး။
အပြင်စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်စံ Semax အမှုန့်, ထိုအရပ်၌လည်းနှစ်ခုမူကွဲကနေ, ဒါပေမဲ့သူတို့နီးပါးတူညီလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ဟာ Na-Semax-ကြားတွင်နဲ့ N-Acetyl ပါဝင်သည်။ လောလောဆယ်နှစ်ခု Semax ဗားရှင်းအကြောင်းကိုကောက်ယူသို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးမကျယ်ပြန့်လေ့လာမှုလည်းမရှိ။ သို့သော် Semax ထဲမှသုံးသပ်ချက်အချို့အသုံးပြုသူများအ Na-Semax-ကြားတွင် N-Acetyl Semax ပိုပြီးသရုပ်ြပနေစဉ်အာရုံစူးစိုက်တိုးမြှင့်များအတွက်အစွမ်းထက်ကြောင်းသတင်းပို့သည်။ အဆိုပါ Semax ရလဒ်များခန္ဓာကိုယ်သောက်သုံးသောတုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လိုပေါ် မူတည်. တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်အခြားမှကွဲပြားပေလိမ့်မည်။ သငျသညျကိုလညျး Semax ဗားရှင်းမဆိုကြိုးစားကြည့်ပေမယ့်သင်တပြင်လုံးကိုသောက်သုံးသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သင်၏ဆရာဝန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာသေချာပါစေအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ Semax အမှုန့် သငျသညျအချိန်မရွေးသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာသင်တို့ပတ်လည်အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အတွေ့အကြုံရှိရောင်းချသူသို့မဟုတ်ပေးသွင်းထံမှရောင်းချရန် Semax ရယူပါ။ မရတိုင်းမူးယစ်ဆေးရောင်းသူအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြန့်ဖြူးခြင်း, ကသင့်အမိန့်မချခင်ပု Semax ပေးသွင်းလေ့လာဖို့အမြဲကောင်းတစ်ဦးအယူအဆပါပဲ။ စတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်သင့် Semax (80714-61-0) get မပြုမီယူပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုရှည်လျား။
ဒါဟာသင်ဤမူးယစ်ဆေးယူပြီး start ရှေ့တော်၌ဆေးဝါးကုသမှုဆေးဘို့သွားကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။ ရောင်းရန် Semax တစ်ဦးဆေးညွှန်းမူးယစ်ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်သင့်ဆရာဝန်ကသင့်အခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်တို့အဘို့မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောတင်ထားရန်ညာဘက်လူတစ်ဦးဖြစ်သင့်သည်။ ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားလည်းပိုကောင်းရလဒ်များကိုများအတွက်ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်များကစောင့်ကြည့်လေ့လာရရန်လိုအပ်နေပါသည်။
Semax purchasing အပေါ်သို့ (80714-61-0ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကတခြား peptides တူသောနိမ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းက), ရောက်ရှိရန်နှင့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပျောက်ကလေးများကနေသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့, Semax အတွေ့အကြုံ, သင်တို့ရှိသမျှသည်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်လိုက်နာအာမခံပါသည်။ သင့်ဆရာဝန်အသိပေးမရှိဘဲသောက်သုံးသောညှိဘယ်တော့မှမ။
2. Semax လျှောက်လွှာ
Semax, အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း peptide အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများ၏ကုသမှုထဲမှာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျမရှိမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းနဲ့တူစောင်ရေမမှန်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အကူအညီပေးနိုငျသောသဘောပေါက်ပြီးနောက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်နှစ်ပေါင်းများစွာကောက်ယူ Semax လေ့လာမှုများကိုလည်းမူးယစ်ဆေးကိုအောင်မြင်စွာပြုမူဆက်ဆံနိုင်သောအခြားရောဂါများထင်ရှားပါပြီ။
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများသို့မဟုတ်ဆရာဝန်များကအမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများဆက်ဆံဖို့ Semax ကိုအသုံးပြုပါ။ Semax စိုးရိမ်စိတ် intranasally လျှောက်ထားပေမယ့်ကိုသာပေါက်ကုသမှုအောက်မှာကနျြးမာရေးအခွအေနေပေါ် မူတည်. ကွာခြားသည်။ တစ်ခုသာကျန်းမာရေးကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်များကအုပ်ချုပ်လတံ့သောထိုးဆေး Semax ပုံစံလည်းရှိပါတယ်။ အမြဲတမ်းတစ်ဦးရေခဲသေတ္တာထဲမှာမူးယစ်ဆေးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့သတိရပါ။
3. Semax အကျိုးကျေးဇူးများ
Semax ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်သင့်ဦးနှောက်အတွက်ကူညီရာတွင်အလွန်အသုံးဝင်ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်တဲ့ nootropic ဖြစ်ပါတယ်။ Semax 2011 အတွက်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ကတည်းကမူးယစ်ဆေးအမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်စွာယူသောအခါ, မူးယစ်ဆေးကိုအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကယ်မနှုတ်နိုင်;
1 ။ ADHD ရောဂါလက္ခဏာများလျှော့ချပေးခဲ့
Semax ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေများ၏ကုသမှုကိုသက်ရောက်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ Semax ADHD သူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အများသောအားဖြင့်အနိမ့်သော memory နဲ့တိုး neurotransmitters, တိုးတက်ကြောင်းပြသပါ။ လောလောဆယ် Semax ရုရှားတွင် ADHD နှင့်အတူသားသမီးတို့အဘို့တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ ADHD dopamine အဆင့်ဆင့်နှောက်ယှက်နိုင်သည့်တစ်ဦး neurodevelopmental အခွအေနေဖြစ်ပြီး, Semax ။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းထဲမှာဆာဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
2 ။ oxide ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီး
မူလက, Semax နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လေဖြတ်ခြင်းခံရသူကိုကူညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ နှစ်တွေမူးယစ်ဆေး oxidative ယိုယွင်းထိန်းချုပ်ရန်နှင့်တားဆီးအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ oxidative ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အခမဲ့အစွန်းရောက်များနှင့် antioxidants တစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုဖြစ်သော oxidative စိတ်ဖိစီးမှု, ဖွစျသှား။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းကနေရရှိလာတဲ့အဆိုပါပျော့ oxidative စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းဓါတ်တိုးများထုတ်လုပ်မှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းအဖြစ်တစ်ရှူးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုထိန်းညှိအတွက်အသုံးဝင်သည်။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောပရိုတိန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များနှင့် DNA တွင်လေဖြတ်ရလဒ်များကိုအဖြစ်ရောဂါများသို့မဟုတ်အခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဓာတ်တိုးစိတ်ဖိစီးမှုတာရှညျ။ အဆိုအရ Semax လေ့လာမှုများ, လေဖြတ်ဆေးဝါးအတွက်မူးယစ်ဆေးများပါဝင်ပျက်စီးသွားသောအာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှုန်းပြန်လည်အပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအကျိုးသက်ရောက်မှုနှောက်နှင့် focal, မော်တာမမှန်ရှောင်ရှားရန်လေဖြတ်ခံရသူကူညီပေးသည်။
3 ။ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်
စိတ်ဖိစီးမှုထိုကဲ့သို့သောအနာရောဂါ, အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိခြင်း, သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာအဖြစ်အများအပြားအခြေအနေများ၏ရလဒ်အဖြစ်ရှိနိုင်ပါသည်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုကြောင့်, သူတို့လည်းကွဲပြားခြားနားအလေးပေးတုံ့ပြန်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသည်းအင်ဇိုင်းတွေထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလေးပေးတုံ့ပြန်မှု။ လေ့လာရေးကြောင်းပြသကြ စိတ်ကျရောဂါများအတွက် Semax ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနစဉ်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များမှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါအသည်းအင်ဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ Semax ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကနေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲများကိုပုံမှန်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
4 ။ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်တိုးမြှင့်
လေဖြတ်ခြင်းအဘို့အအန္တရာယ်အရှိဆုံးအန္တရာယ်အချက်မရှိခြင်းသို့မဟုတ်အားနည်းသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ဟာဦးနှောက်မှ, cerebrovascular မလုံလောက်အဖြစ်လူသိများသောအခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ လေဖြတ်ကုသမှု Semax ၏အသုံးပြုမှုကိုဦးနှောက်မှသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်တိုးတက်စေခြင်းဖြင့်အပြုသဘောရလာဒ်များတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးသင်တို့ကိုလည်းမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများလာသောအခါကြီးထွားလာမှသင်၏နှလုံးတားဆီးအတွက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အလှည့်တွင်, ဤသူသည်သင်တို့အပူတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာရှိပါတယ်ရင်တောင်မဆိုနှလုံးပျက်ကွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေသင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
5.Increases ဟာဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ Neurotropic Factor (BDNF)
BDNF အာရုံခံရှင်သန်ရပ်တည်ရေး, သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့် synapses ၏ plasticity ၌အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အဆိုပါ BDNF အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသို့မဟုတ်ပင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပိုမိုဆိုးဝါးလာစေနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်တာကြောင့်အနည်းဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရန်သင့်အားဖျောထုတျအဖြစ်, Semax ကိုလည်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ BDFN Enhancer နှင့်လက္ခဏာဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး BDNF ထုတ်လုပ်မှု 800% အထိဝယ်လို့တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
တိုးပွားလာ BDNF ထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့် Semax ထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာဖြေလျော့အတွက်ကူညီပေးသည်။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ BDNF အဆင့်ဆင့်စိတ်ကျရောဂါလျှော့ချတစ်ဦးအပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိပုံကိုမြင့်မားသောထင်ရှားပြကြပြီ။ Semax Easi အတွက်ကူညီပေးသည်သော adenosine, dopamine, serotonin, နှင့် histamine ထုတ်လုပ်ရန် limbic system ကို receptors လှုံ့ဆော်
ADH, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျရောဂါနဲ့ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ ng ။ ဤအရာအလုံးစုံ neurotransmitters တို့၏စီးပွါး, အရှင်အာရုံနဲ့ productivity တိုးမြှင့်, လှုံ့ဆျောမှုမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
6 ။ Semax ဝေဒနာသက်သာရာအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်
သငျသညျအခြို့သောဝဒေနာကြုံနေရအခါ, သင့်ဦးနှောက်ကိုမကြာခဏ enkephalins, သောမှိုင်းနာကျင်မှုအာရုံအဖြစ်လူသိများ neurotransmitters လွှတ်ပေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစငျသညျနာကျင်မှုအတွက်အခါပေါ်ပေါက်သောထိတ်လန့်ခံစားချက်တွေကိုအသေးအဖွဲအားဖြင့်နာကျင်မှုအမြင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။
Enkephalins သာအချို့သောအချိန်များအတွက်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုထိန်းညှိနိုင်တယ်, ထို့ကွောငျ့, Semax ယင်း၏ပျက်ပြားတားဆီးအဖြစ်က၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ကူညီပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကြာကြာအဘို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာကျင်မှုပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးနေနှင့် Semax တစ်အစွမ်းထက်နာကျင်မှုစိတ်သက်သာရာစေသည်။
7 ။ Semax မှတ်ဉာဏ် retention ကိုပိုကောင်းစေ
enkephalins တူသော Neurotransmitters အမြင်တခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိသည်, တိုးမြှင့်အခါသူတို့သည်အမှတ်တရများဖန်တီးခြင်းနှင့်စိတ်ဓါတ်များကိုထိန်းညှိအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ ကောင်းသောကျန်းမာရေးနှင့်အတူလုပ်သားများအပေါ်ရုရှား၌ကောက်ယူဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသန, Semax အမှုန့် သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ် retention ကိုမြှင့်တင်ရန်။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများလူသားတစ်ဦးဦးနှောက်အတွက်သင့်လျော်သောသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် oxidative ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏မြှင့်တင်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ hippocampus အတွက် BDNF အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးကိုလည်း hippocampus စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အဘို့အဦးနှောက်ရဲ့အလယ်ဗဟိုဖြစ်သောကြောင့်မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်အောင်အတွက်အရေးပါသောအဖြစ်ဟုဆိုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, BDNF ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းဆည်း, မှတ်ဉာဏ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်သစ်များကိုသင်ယူနှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းတိုးမြှင့်အတွက်ကူညီပေးသည်။ BDNF ဦးနှောက်ထဲမှာဦးနှောက် function ကိုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့တိုးတက်အောင်အတွက်အကူအညီအာရုံကြောလမ်းကြောင်းတစ်မျိုးဆက်ဖြစ်သော Neurogenesis ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆျော။
4. Semax ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလား
Semax အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုသည့်အခါတစ်ဦးအစွမ်းထက် nootropic နှင့်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကသို့ရရှိသွားတဲ့ပြီးတာနဲ့ Semax လည်းဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotropic အချက်များ (BDNF) အဆင့်ဆင့်နှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးပွားစေပါသည်။
သိပ္ပံနည်းကျ, BDNF ကာကွယ်နှင့်ခိုင်ခံ့စေသင့်ဦးနှောက်ဆဲလ်, ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ခြုံငုံဦးနှောက်ပျော့မြှင့်တင်အားဖြင့်ခြုံငုံဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ကြောင်းပရိုတိန်းသည်။ အများအားဖြင့်, BDNF အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးကြောင်းဆို nootropic အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့် Semax တစ်အစွမ်းထက် BDNF ခိုင်ခံ့စေဖြည့်စွက်၏ပြီးပြည့်စုံသောသာဓကဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
အချို့ကိစ္စများတွင် Semax stack စိတ်ဓါတ်များနှင့်အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးအဖြစ်မြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ neurotransmitters နေသောသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် dopamine နှင့် serotonin လှုပ်ရှားမှုများမြင့်မားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တွေ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Semax အားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဆက်လက်ပါပြီ။
5. အဘယ်သို့ငါ Semax ကိုသုံးပါသင့်သလဲ
Semax သောက်သုံးသောကုသမှုအောက်မှာကနျြးမာရေးအခွအေနေပေါ်မူတည်နှင့်ဆေးထိုးဆေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတ်မှတ်ရပါမည်။ အဆိုပါအကြံပြု Semax သောက်သုံးသော 300mcg ထံမှ 600mcg ဖို့နေကြပါတယ်။ သို့သော်သစ်ကိုအသုံးပြုသူများမူးယစ်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ဆရာဝန်များကနောက်ပိုင်းမှာချိန်ညှိနိုင်သည့်အနိမ့်ဆေးညွှန်းနှင့်အတူ start ရန်အကြံပြုပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်ကတည်းကစတင်အဘို့အမြင့်မားတဲ့သောက်သုံးသောယူပြီးအန္တာရာယ်သင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Semax ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်မဆိုစွန့်စားမှုကိုရှောင်ရှားဖို့ဘာမဆိုအကြောင်းပြချက်အဘို့ဤမူးယစ်ဆေးယူပြီးရှေ့တော်၌ဆေးစစ်ဘို့သွားကြဖို့အမြဲအကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။
Semax အများစု intranasally ခေါ်ဆောင်သွားသည်, သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသံသရာများအတွက်တစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးချင်းစီနှာခေါင်းထဲသို့ဇိဝနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်2သို့မဟုတ်3နည်းနည်းပေါက်မှသာယူသင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုပြီးနောက်ပြန်လည်နာလန်ထူကာလအတွက် Semax ယူပြီးတဲ့အခါမှာအဖြစ်တချို့ကအခြေအနေများ, သငျသညျ,4တစ်ခုချင်းစီကိုနှာခေါင်းမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်တစ်နေ့လျှင်ခြောက်ကြိမ်ယူသင့်ပါတယ်။ Post ကို narcosis မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုရောဂါအဘို့, အကြံပြုသောက်သုံးသော3တစ်ခုချင်းစီကိုနှာခေါင်းသုံးခုအချိန်တစ်ရက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။2မှစိတ်ကျရောဂါ3များအတွက် Semax တနေ့သုံးကြိမ်အကြံပြုထားတဲ့ဆေးထိုးသည်, တစ်ဦးချင်းစီနှာခေါင်းမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့သည် Semax ဆေးထိုးသောက်သုံးသော ကုသမှုအောက်မှာကနျြးမာရေးအခွအေနေအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်လုပ်သူထောက်ခံချက်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်မပြုစေခြင်းငှါအဖြစ်သို့သော်ဆရာဝန်၏သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်ကပ်။ အခြားသူများကိုအလိုရှိသောသက်ရောက်မှုရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများယူရပါလိမ့်မယ်နေစဉ်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်, အနိမ့်ဆေးညွှန်းကိုယူပြီးပြီးနောက်အရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုရပေလိမ့်မည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အားသာချက်တယောက်ကိုတယောက်တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ကွဲပြားကတည်းကဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ပါပဲ။
က) Semax Injection
Semax ကိုလည်းနှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားတွေနဲ့မသက်မသာနေသောအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုသောက်သုံးသောဖြစ်နိုင်သည့်ဆေးထိုး, မှတဆင့်အုပ်ချုပ်နိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံး Semax နှာခေါင်းသူတို့လျှောက်လွှာအတွက်ကွဲပြားသာကြောင်းကိုလေပေါ်မှာနှင့်အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးပုံစံများအလားတူရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
သင့်ဆရာဝန်နှစ်ခုအကြားတဦးတည်းသောက်သုံးသောပုံစံရွေးချယ်ဖို့သငျသညျကိုတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ အများအားဖြင့်, ဆေးထိုးဆေးညွှန်းကိုအခြား Semax ပုံစံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်မှန်မှန်သင် ပို. ပင်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှုန်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်ယူရမယ်သောနှာခေါင်းပေါက်ကဲ့သို့ထိုးယူရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ခ) Semax ဆေးထိုးသောက်သုံးသော
သလောက် Semax ဆေးထိုး အဆိုပါနှာခေါင်းသောက်သုံးသောဖို့အကောင်းဆုံးအစားထိုးပေးအမြဲသင်သည်သင်၏ဆရာဝန်ကနေဆေးထိုးရသေချာပါစေ။ ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများကွဲပြားခြားနားသောသောက်သုံးသောအဘို့ကိုခေါ်ပါ။ တစ်ဦးကဆေးစစ်ကိုလည်းသင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုသောက်သုံးသော setting ထဲမှာသင့်ရဲ့ဆေးမှူးကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Semax သောက်သုံးသော 300mcg မှ 600mcg အကြားဖြစ်သင့်တယ်။
အဆိုပါသောက်သုံးသောသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပင်အထက်သို့ချိန်ညှိပထမဦးဆုံး Semax ဆေးထိုး dosageor တုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ထပ်မံလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ကိစ္စတွင်သင်လေ့ကျင့်သို့မဟုတ်သင့်သောက်သုံးသောယူပုံမှန်လည်ပတ်ဘို့အချိန်စာရင်းရန်သင့်ဆရာဝန်ကိုတောင်းဆိုနိုင်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိုးသွင်းအကြောင်းကိုသေချာမသိကြ။ အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါများဆီသို့ဦးတည်နိုင်သကဲ့သို့သင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိကြပါလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ထိုးသွင်းအန္တာရာယ်မထားပါနဲ့။
6. သငျသညျ Semax အသုံးပြုတဲ့အခါမဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါသလား?
ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးခဲ့သည်ကတည်းက FDA ကအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Semax အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနာမည်ကြီးမူးယစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် Semax ထိရောက်မှုသက်သေပြရာရုရှား၌ပြုသောအမှုသုတေသနနှင့်စမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသညျလူသားတို့အပေါ်အမျိုးမျိုးသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်ချက်အတွက် featured ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အားလုံးနီးပါးစမ်းသပ်မှုမျှအလေးအနက် Semax ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသတင်းပို့ပါ။ ဒါက Semax စျေးကွက်အပေါ်အလုံခြုံဆုံး nootropic ယနေ့များထဲမှစေသည်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့ Semax ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခေါင်းကိုက်ခြင်း, လေဖြတ်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုမမှန်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆုံးအံ့သြစရာရှုထောင့်ကမြင့်မားတဲ့အာနိသင်ရှိကြောင်း, သို့သော်မြင့်မားသောဆေးညွှန်းထဲမှာယူလျှင်ပင်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှအဆိပ်အတောက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် Semax မကြာသေးမီကယူကရိန်းက၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအတည်ပြုထားပြီးသည့်အခါသည်အထိရုရှားကပြင်ပမှာလူအတော်များများကအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်းခံစိတ်အဆင့်ကိုလည်း, သင်မူးယစ်ဆေးယူပြီးပြီးနောက်ရရှိမည်သော Semax ရလဒ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
တချို့ကအသေးအဖှဲ Semax ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ Semax ထိုကဲ့သို့သောခြောက်သွေ့သောနှုတ်ကဲ့သို့သုံးစွဲသူများတိုးပွားလာချွေး, ပျို့ခြင်း, ထိနမိဒ္ဓအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ Semax နှင့်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုလည်းအချို့သော Semax အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်အခြားဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသလောက်အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်, ဒါပေမယ့်အကြံအဥာဏ်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အမှု၌သင်တို့ကိုမဆိုအခြားပြင်းထန်သော Semax ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအကူအညီကိုချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားခံစားရသည်။
7. သုံးတဲ့အခါသင်တစ်ဦး Semax stack ကိုသုံးပါသငျ့သလော
အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများ၏ကုသမှုများအတွက်တစ်ဦးတည်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်, Semax အရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုကယ်တင်တတ်၏။ သင်တစ်ဦး stack ထဲမှာယူသည့်အခါသို့သော်လည်းပဲအများကြီး nootropics ကဲ့သို့သင် Semax အများဆုံးထိရောက်မှုမှီနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးသက်သာစေသောဆေးနှင့်လှုံ့ဆော်အဖြစ်အသုံးပြုစျေးကွက်အပေါ်အခြားလူသိ nootropic ဖြစ်သော Kratom, Semax နှင့်အတူအကောင်းဆုံး stack စေသည်။ အဖြစ်တာ Semax အသုံးပြုသူအနားယူနှင့်ဝါဒီများကိုစွမ်းအားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်, Kratom အတူကယူပြီးလိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဒါဟာကြောင့်လှုံ့ဆော်နှင့်အတူဤမူးယစ်ဆေးတာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စေခြင်းငှါစွမ်းအင်အရူးအမူးမှ Phenylpiracetam နှင့်အတူ Semax stacking စဉ်းစားရန်အကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။ Phenylpiracetam အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သိမှတ်ခံစားမှု-တိုးမြှင် nootropic ဒါပေမယ့်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင်ရွက်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, များစွာသောအသုံးပြုသူများကသူတို့ထိုကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွမ်းအင်တစ်ခုကြာရှည်မှန်မှန်စီးဆင်းခွင့်ပြုထားတဲ့ curcumin ကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူကပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာသိသိသာသာ Semax အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူ Semax အသုံးပြုသူများအတွက်တစ်အပန်းဖြေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော Ashwagandha နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးပေါင်းစပ်ပြီးစဉ်းစားသင့်။ Ashwagandha တစ်အစွမ်းထက်ဖြစ်ပါသည် Nootropic သော Semax အလားအလာစိုးရိမ်စိတ် spikes ချအအေးအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အားလုံးအားလုံးအတွက်, Semax ဟာမျှော်မှန်းရလဒ်တိုးမြှင့်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသော nootropics နှင့်အတူ stacked နိုင်ပါသည်။ သငျသညျ Semax နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့ရာ nootropic အကြောင်းကိုသေချာမသိကြပါလျှင်သို့သျောလညျး, အစဉ်မပြတ်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်။ ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်အဖြစ်မှားယွင်းတဲ့ stack သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အန္တရာယ်များသည်။
8. Selank vs Semax အကြားခြားနားချက်များဘာတွေလဲ?
Semax နှင့် Selank ရုရှားတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအားလုံး nootropics ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တခါတရံသူတို့ကထိုကဲ့သို့သောညှိနှိုင်းမှုမမှန်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်အလားတူကျန်းမာရေးအခြေအနေများဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုကြသည်။ အများဆုံးရလဒ်များကိုအဘို့, နှစ်ခုမူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းတွဲသုံးနိုင်ပါသည်။ Selank စိတ်ဖိစီးမှုများပြင်းထန်သက်ရောက်မှု minimize လုပ်ရုံ Semax တူသောကိုမဆိုအလေးအနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့မလူသိများသောတစ်ဦး anxiolytic peptide ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံ, Selank သင့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသော endogenous tetrapeptide Tuftsin, ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Selank သက်ရောက်မှုရှည်နှင့် peptide ပျက်ပြားနှေးကွေးရန်, ထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ Glyproline ပါဝင်သည်။
ဦးနှောက်ထဲမှာ Selank လုပ်ဆောင်ချက်၏ mode ကိုလည်းအလွန်ထူးခြားသောဖြစ်၏ အဲဒါကိုသိမြင်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်လှုပ်ရှားမှုများတိုးမြှင့်ထားတဲ့ anti-asthenic နှင့်လက္ခဏာဖြည့်စွက်အတူ anti-စိုးရိမ်စိတ်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထိုကွောငျ့, Semax ။ vs Selank ။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံဖြစ်ပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သိမြင် enhancers များမှာနိုင်ပါတယ်။ Selank intranasally အုပ်ချုပ်သည်နှင့်သောက်သုံးသောဆေးဝါးအောက်ရှိအခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုမူးယစ်ဆေးသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောကျန်းမာရေးပြဿနာများဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုကြသည်ကိုဘယ်လိုပိုမိုကွာခြား။ Anti-စိုးရိမ်စိတ်အဖြစ်အသုံးပြုသည့်အခါ Selank အရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုကယ်တင်တတ်၏နေချိန်မှာ Semax, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါတိုးတက်အောင်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်။ သို့သော်နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ BDNF အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း, အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့အတူတကွ stacked နိုင်ပါသည်။ Selank vs Semax အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဆေးပညာပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေနဲ့တိုင်ပင်။
9. ငါအွန်လိုင်း Semax ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ?
သငျသညျရုရှားကမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, Semax ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့အညွှန်းအောက်တွင်ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ FDA ကအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေပေမယ်သို့သော်အမေရိက၏ United States မှာ, မူးယစ်ဆေး, လျော့နည်းစညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသင်အွန်လိုင်း nootropic စတိုးဆိုင်မှတဆင့်ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲ Semax အသုံးပြုသူများသည်အလွန်သတိထားပါနှင့်အကောင်းဆုံး Semax ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရဖို့သူတို့ရဲ့အချိန်ယူနိုင်ရန်အကြံပြုသည်။ သင့်ရဲ့သုတေသနပြုလုပ်ပါ, အ Semax ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသင့်ရဲ့အမိန့်မချခင်လည်ပတ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစစ်ဆေးပါ။ သင်စျေးကွက်အပေါ်ရှာတွေ့ရှိသမျှ Semax ရောင်းချသူယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ဘဲသတိရပါ။
သတငျးကောငျးကိုကျနော်တို့ကဒေသအတွက်ဦးဆောင် Semax ပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာသင့်အမိန့်အောင်နှင့်တတ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိရန်သေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ရောင်းချခြင်းနှင့် Semax stack များအတွက် Semax ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေအွန်လိုင်းစတိုးပေါ်မှာရှိသမျှရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကဂရုစိုက်တတ်တဲ့များမှာ Semax အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသောကြောင့်, ကျွန်တော်တစ်ဦးဆေးစစ်ခံယူသို့မဟုတ်တပြင်လုံးကိုသောက်သုံးသောသံသရာအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတျသကျဘဲကျနော်တို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးဆန့်ကျင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားဖောက်သည်သတိထား။ ဒါ့အပြင်သင်သည်မည်သည့်ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား။
Dolotov, OV, Eremin, KO, Andreeva, LA က, Novosadova, EV, Raevskii, KS, Myasoedov, အဲန်အက်ဖ်, & Grivennikov, အိုဝါ (2015) ။ Semax 6-hydroxydopamine-သွေးဆောင် neurotoxicity တစ်မော်ဒယ်အတွက်သန္ဓေသားကြွက် mesencephalon ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ရောထွေး neuroglial ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု၌ tyrosine hydroxylase-အပြုသဘောအာရုံခံအသေခံကာကွယ်ပေးသည်။ Neurochemical ဂျာနယ်, 9(4), 295-298 ။
Koroleva, SV, & Myasoedov, အဲန်အက်ဖ် (2018) ။ ကုထုံးနှင့်သုတေသနတို့အတွက်တစ်ဦးက Universal မူးယစ်ဆေးအဖြစ် Semax ။ ဇီဝဗေဒသတင်းလွှာ, 45(6), 589-600 ။
Manchenko, DM, Glazova, N. , Levitskaia, Ng, Andreeva, LA က, Kamenskiĭ, AA ကို, & Miasoedov, အဲန်အက်ဖ် (2010) ။ Nootropic နှင့်အုပ်ချုပ်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများကအောက်ပါ Semax ၏ analgesic ဆိုးကျိုးများ။ Rossiiskii zhurnal imeni ထားတဲ့ IM Sechenova fiziologicheskii, 96(10), 1014-1023 ။
Malyshev, AV စနစ်, Razumkina, EV, Dubynin, VA သို့, & Myasoedov, အဲန်အက်ဖ် (2013, မေလ) ။ Semax valproic acid ကို၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိတ်ဆက်စကားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဦးနှောက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအလျောက်။ တွင် Doklady ဇီဝသိပ္ပံ (Vol ။ 450, အမှတ် 1, p ။ 126) ။ Springer သိပ္ပံ & စီးပွားရေးမီဒီယာ။
Triptorelin Acetate Injection / Powder: ဘယ်မှာငါကရနိုင်မလဲ?
Peptide Degarelix အမှုန့်: ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသည်အသုံးပြုထားတဲ့တစ်ဦးကစစ်မှန်သောမူးယစ်ဆေး
Shangke ဓာတုတက်ကြွဆေးဝါးအလယ်အလတ် (API) ကိုအထူးပြုနေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်, အတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဓါတ်ခွဲခန်းသော့ကိုမှတ်ဖြစ်ကြသည်။
Xuchang Fine ဓာတုစက်မှုပန်းခြံ, နန်ပြည်နယ်, တရုတ်
© Shangke ဓာတု 2019 | အတူ Created www.phcoker.com အားဖြင့်